Daawo muuqaalka: Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay Jaaliyada Soomaaliyeed ee Imaaraadka carabta. |
Daawo muuqaalka: Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay Jaaliyada Soomaaliyeed ee Imaaraadka carabta.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sh. Max’uud oo xalay kulan saacado qaatay la yeeshay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka IMaaraadka ayaa ka dalbaday iney garab istaagaan dowladiisa isagoona ka codsaday iney ka taageeraan dhanka dhaqaalaha oo uu sheegay iney si weyn uga lkidato dowlada Soomaaliya.
Madaxweynaha yaa ku booriyey ganacsatada Soomaaliyeed iney dalka dib ugu soo noqdaan isla markaane ay ka qayb galaan mashaariicda dalka lagu hormarinayo ee xiligan ka bilowday guud aah dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo muddo dheer ka dib heshay niicawda nabada.
Madaxweynaha umada Soomaaliyeed ayaa u sharaxay Jaaliyadii uu kula kulmay magaalada Dubai kuwaas oo u badnaaa ganacsato in dowlada Soomaaliya ay halgan ugu jirto soo nooleynta kaabayaashii dowlada oo gabi ahaanba burburay sida Amniga, Caafimaadka,Waxbarashada iyo Biyaha oo uu sheegay iney yihii waxyaabaha aas-aasiga u ah nolsha aadamaha.
Wuxuuna shaaca ka qaaday in dowladu ay diyaarisay qorshe bilow ah kaasoo in kabadan 76 degmo oo ka tirsan dalka looga hirgalinayo Goob Caafimaad,Dugsi Waxbarasho,Ceelbiyood,Saldhig Boolis iyo Xarun maamul degmo.
Wuxuuna tibaaxay in qorshaha intaa baaxada la eg aysan jirin cid si gaar ah u fangareynaysa balse ay tahay talaabo ay go’aansatay dowlada Soomaaliya wuxuuna si aan ka leexleexad lahayn ugua codsaday ganacsatada Soomaaliyeed iney kaalin libaax leh ka qaataan dadaalada ay dowladu wado ee lagu doonayo in lagu soo nooleeyo kaabayaashii dowliga ahaa ee uu dalku lahaa.
Halkaan hoose ka daawo soo dhaweyntii ay jaaliyada Imaaraadka u sameeyeen madaxweynaha Soomaaliya.